सिद्धार्थ शुक्लाको यो अन्तिम ‘पोस्ट’ भाइरल, त्यस्तो के लेखेका रैछन ? — Imandarmedia.com
सिद्धार्थ शुक्लाको यो अन्तिम ‘पोस्ट’ भाइरल, त्यस्तो के लेखेका रैछन ?
उनको पार्थिव शरीरलाई हिजै अन्त्यष्टि गरिसकेका छन् । भारतीय मिडियाका अनुसार सिद्धार्थ केही औ’षधि खा’एर सु’तेका थिए । तर, उनले कस्तो प्रकारको औ’ष’धि से’वन गरेका थिए भन्ने खुलेको छैन । सिद्धार्थ शुक्लाको निधनपछि बलिउड स्त’ब्ध भएको छ । कलाकारहरुले उनको निधनमा दुख व्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जली दिइरहेका छन् ।